News Missile » पुरुष हिंसा विरुद्ध आवाज उठाइन्न किन ?
पुरुष हिंसा विरुद्ध आवाज उठाइन्न किन ?
Monday, August 14th, 2017 at 12:19 pm By:News Missile Blogs, Crime, Highlighted News 487 Views
हामी र हाम्रा समानता र समताका विषयमा बडो ठूल्ठूला हाँक दिने गर्छौ । कानूनमा पनि समान हुनु पर्ने कुरा गर्छौं तर व्यवहारमा भने हिंसामा अझै पनि लैगिक समानताको प्रारुप खोजिरहेका छौं । हिंसामा लैंगिकता कहिलेदेखि गाँसिन थाल्यो ? हिंसा त हिंसा नै हो नि, चाहे त्यो जतिसुकै पुरुषले गरोस् या महिलाले। हिंसा सहने त ‘पीडित’ नै हुन्छन् नि, ती महिला हो या पुरुष । हिंसा गर्ने ‘पीडक’ नै हुन्, चाहे महिला होस् या पुरुष।
“घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार हो ” भनेर खुबै बौद्धिकताको ढ्वाङ्ग फूक्ने गर्छौं। यसो भनिरहँदा घरभन्दा अन्यत्र हिंसा हुँदैन भन्न खोजिएको हो ? स्कूल शान्ति नै शिक्षा क्षेत्रको आधार, सडक शान्ति नै यात्राको आधार किन भनिएन? आखिर कहाँ छैन हिंसा ? कसले को माथि गर्दैन हिंसा ? मौका पाउँदा चौका हान्ने अवसरवादीमा भाले बन्न जो पनि पछि पर्दैनन् यहाँ । त्यसमा पुरुषको मात्रै संलग्नता हुन्छ र रहन्छ भन्ने छैन, हिंसामा महिलाको हिस्सा उत्तिकै हुने गर्दछ।
हामी सधैंभरि श्रीमानले श्रीमतीमाथि अत्याचार गरेको देख्छौं तर श्रीमतीबाट उत्पीडित श्रीमानको अवस्थाको विषयमा भने बेखबर बन्छौं। हिंसा भनेको कुटपिट गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, मानमर्दन गर्ने जस्ता शारिरिक मात्र होइन, मानसिक रुपमा गरिने दुव्र्यहार पनि हिंसाकै अर्को प्रारुप हो ।
हिंसा जहिले पनि पुरुषले महिलामाथि मात्रै गर्छन् भन्ने कुराले हाम्रो दिमागमा जरा गाडेको छ । महिलाले फिटिक्कै गल्ती गर्दैनन्, महिला भनेका सहने मात्र प्राणी हुन् भन्ने बुझाई छ । तर, हेप्ने र होच्याउने ठाउँ आयो भने महिलाले पनि कतै बाँकी राख्दैनन्, राखेको देखिएको छैन भनेर भन्दा पनि फरक पर्दैन। परिमाण धेरथोर मात्र हो। यस्तो आडम्बरी सोच हामी सबैको मनबाट नफालेसम्म हिंसा विरुद्धमा जतिसुकै अभियान चलाए पनि त्यो नाम मात्रको देखावटीपन र नक्कली मात्र हुनेछ।
रोजगार लोग्नेका बेरोजगार श्रीमती बन्नुपर्दा महिलाहरु हेपिनु परेको गुनासो गर्छन् । उनीहरु आफू जागिरमा गएर लोग्ने घरमा बेरोजगार भएर बसोस् त, उसले कति अमिलो वचन सुन्नु र खप्नु पर्छ! खानदानीका छोरी बिहे गर्ने सामान्य हैसियतको श्रीमान् बाँचुन्जेल श्रीमतीसँग हेपिएर बस्नुपर्छ, यसमा महिलाले गरेका हिंसाको वास्ता गरिँदैन। किनकि हिंसामा पुरुषकै हात हुन्छ भन्ने आम मान्यता रहिआएको छ।
केही वर्षअगाडि मात्र घटेको घटना आँखै अगाडीकोे दृष्टान्त हो यो…
मेरो अफिससंगैको घरमा एक जना दिदीका आमा छोरी डेरामा बस्थे । उनी एक नाम चलेको बैंकमा काम गर्थिन्। ती दिदीका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । तीन वर्ष विदेश बसेर श्रीमान् घर फर्किए। श्रीमती बैंककी जागिरे, छोरी स्कूल जाने भइसकेकी थिई । कति खुशी थियो परिवार ! श्रीमती अफिस जान्थिन्, श्रीमानले श्रीमतीका लुगा धोइ दिन्थे, घर सफा गर्थे । बच्चालाई खाना खुवाउने, स्कूल पुर्याउँने काम पनि आफैं गर्थे । सकारात्मक सोचका थिए उनी । श्रीमती अफिसबाट अँध्यारो अनुहार लगाउँदै फर्किन्थिन्।
‘यस बेलासम्म खाना पकाएका छैनौ ? बच्चालाई यस्तो गरेनौ ? उस्तो गरेनौ ? कुन कुन लुगा धोई दियौ ? दिनभरि के के गर्र्यौउ त?’ यस्तै अनेक कुरामा गनगन गर्थिन् । श्रीमान् चाहिँ आज भ्याइनँ, यति गरेँ अरु भोलि गरुँला भन्थे । वरपरका मानिस कुरा काट्ने खुराक पाउँथे । ‘कस्तो जोइटिग्रे रहेछ, श्रीमतीका लुगा धोएर बसेको छ, जानु नि फेरि विदेश, स्वास्नीको गुलाम भएर त के बस्नु!’ यस्तै यस्तै।
श्रीमतीको ठाउँमा श्रीमान् अफिस गएका हुन्थे र घरको काम श्रीमतीले गर्थिन् भने त्यो कुरा काट्ने खुराक बन्दैन थियो। तर, जागिरे श्रीमतीको श्रीमान् भएर गृहिणीको काम गर्दा यस्ता कुरा सुन्नु पर्यो। ती दिदी लोग्नेलाई यति हेप्थिन्, बाटोमा सँगै हिँड्न पनि गाह्रो मान्थिन् । अफिसका साथीसँग भेट हुँदा पनि मेरो लोग्ने भनेर चिनाउँथिनन्। साथीहरुले श्रीमान् कहाँ के काम गर्छन् भनेर सोधेमा आफ्नो बेइज्जत हुने उनको चिन्ता थियो। बर्षदिनसम्म दुई जनाको बीचमा राम्रो बोलीचाली समेत भएन, जेनतेन बसेका श्रीमानले पछि के सोचे कुन्नि, उनी फेरि विदेश हान्निए ।
यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता पात्र धेरै छन् समाजमा । ती दिदीले आफ्नो लोग्नेको सम्मान र औकात दाँजिन्, पेशा दाँजिन् र सम्मान दिन सकिनन् । यही व्यवहार पुरुषले महिलामाथि गरे भने त्यसैलाई हामी महिलामाथि हुने हिंसा भन्छौ र ठान्छौं । तर त्यस्तै व्यवहार श्रीमतीले आफ्ना लोग्नेमाथि गर्दा त्यो पुरुष हिंसा हुने कि नहुने । पुरुषमाथि हुने यस्ता खाले हिंसाको विषय उपरमा पनि बोलौं न! कति महिला हिंसाका बारेमा मात्र आवाज उठाउने पुरुष हिंसाका बारेमा भने आवाज किन नउठाउँने नि।